Ny zavamaniry "Riot" an'i Wistron India dia namboarina na nahazo baiko Apple indray - YIC International Co Limited |Ny mpamatsy fitaovana elektronika mihodina |www.YIC-Electronics.com
Home > News > Ny zavamaniry "Riot" an'i Wistron India dia namboarina na nahazo baiko Apple indray
Ny zavamaniry "Riot" an'i Wistron India dia namboarina na nahazo baiko Apple indray
Nanakorontana ny mpiasa tao amin'ny foiben'i Wistron atsimon'i India tamin'ny Desambra lasa teo. Ny orinasa dia niara-niasa tamin'i Apple mba hamita ny fandaminana indray ny zavamaniry. Ny haino aman-jery Taiwan dia nanonona vaovao avy any India. Shen Qingyao, tale jeneralin'ny Wistron ary tale jeneralin'ny Wistron Intelligence, dia nilaza fa tsy ho ela dia hanomboka hiasa ilay orinasa.
Loharanom-baovao iray tao amin'ny indostrian'ny finday Indiana nilaza tamin'ny Central News Agency fa taorian'ny nifararan'i Wistron sy Apple hanitsy ny fitantanana ny zavamaniry mpanakorontana dia mety handefa indray ny baiko iPhone 12 Pro Max OEM tany am-boalohany i Wistron any India.
Wistron dia namokatra orinasa Apple an'ny iPhone ao amin'ny faritra indostrialy Narasapura any Karnataka, India. Tamin'ny volana desambra tamin'ny taon-dasa, ny orinasa iray misahana ny asa dia nanemotra ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa, ka niafara tamin'ny tranga mahery setra nahitana mpiasa an'arivony nanodidina ilay orinasa. Tamin'ny farany, ampahany amin'ny laharam-pamokarana, simba ny fiara sy ny fitaovan'ny birao, ary ny iPhone no nangalarina teo amin'ny tsipika famokarana, ka namoizana 400 tapitrisa hatramin'ny 500 tapitrisa ropia.
Araka ny fanadihadiana nataon'ny Governemantam-paritany Karnataka, na dia ny tsy fandoavan'ny orinasan-tseran'ny mpiasa ny mpiasan'izy ireo aza no tena nahatonga ny korontana, dia tsy nahavita nanefa ny andraikiny nitantana sy nanara-maso ny orinasam-panompoana i Wistron, ary tsy nahavita nitahiry firaketana ny mpiasa 'ora sy karama. Nomena lamandy koa io. Ity tranga ity aza dia nanakana ny baiko iPhone 12 Pro Max izay nanirahan'i Apple an'i Wistron tany am-boalohany hanamboatra any India.
Mba hamahana ny olana marobe ao amin'ny orinasa indiana dia noroahin'i Wistron ny filoha lefitra taizazy tompon'andraikitra tamin'ny fanaraha-maso ny orinasan-javamaniry indiana tamin'ny faran'ny taona lasa teo, ary tamin'izany fotoana izany dia nanendry ny tale jeneralin'ny mpamokatra amerikanina Pan American taloha sy Wistron Amerika Avaratra, izay tamin'ny voalohany dia nanangana ny orinasam-pamokarana finday any India. Xu Honggui, filohan'ny sampana, nandamina indray.
Ny Times of India androany dia nanonona an'i Shen Qingyao nilaza fa hatramin'ny korontana tamin'ny Desambra dia niasa mafy ny orinasa hanatsara tanteraka sy hamaha olana ary hampiakatra ny fenitra fitantanana. Ny mpiasa rehetra dia mahazo ny karama ara-potoana rehetra ary mampihatra rafi-karama sy karama vaovao. , Mba hahazoana antoka fa ny olon-drehetra dia afaka mahazo ny karama marina sy manome ny antontan-taratasy karama marina.
Shen Qingyao dia nilaza fa hanome ny mpiasa rehetra fandaharam-panofanana nohatsaraina ny orinasa, ary afaka mahazo vaovao tsy mitonona anarana amin'ny alàlan'ny rafitra vaovao ihany koa ireo mpiasa ary manontany ny orinasa rehetra. Nanampy izy hoe "Manantena ny hanombohana indray ny asa izahay."
Nanambara ihany koa i Apple fa tao anatin'ny 8 herinandro lasa, ny ekipa mpamokatra iPhone sy ny auditors tsy miankina dia niara-niasa tamin'i Wistron mba hahazoana antoka fa napetraka ao amin'ny orinasa Narassapura ny rafitra sy ny dingana ilaina. Vita ny fanitsiana sy fanatsarana feno. Wistron koa dia nandamina ireo orinasany. Ny ekipa mpikarama dia nanamafy ny fiofanana sy ny fanohanana ny mpiasa.